Global Voices teny Malagasy » Momba ny fifindrana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jolay 2019 6:27 GMT 1	 · Mpanoratra Shivanee Ramlochan Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Trinite sy Tobago, Venezoela, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Ny Tetezana - The Bridge
Saripik an'i elizabeth lies  ao amin'ny Unsplash . Azon'ny rehetra ampiasaina.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra nasiam-panovana tamin'ny fanandramana fohy navoakan'ilay poetaTrinidadiana Shivanee Ramlochan tao amin'ny Facebook, izay mamaly ny fandraisana ireo mpifindramonina Venezoeliana ao Trinidad sy Tobago.
Nieritreritra momba ny firafitra ara-batana sy ara-psikô-jeografikan'ny fifindrana aho. Miharihary sy mivantana ny antony, ary manahirana ahy isan'andro izy ireo, raha mieritreritra izay nolazaiko mikasika ny olan'ny mpifindramonina Venezoelliana manerantany, sy ny zavatra tsy voambarako. Miaiky aho fa misy ny fikatsoan'ny alahelo manoloana ny endriky ny tatitra maro isan'andro. . .tahaka ny zara raha azo lazaina ho voambolana mety aminy ny fankahalana vahiny amin'ny heviny manokana.
Resadresaka hafa momba ity lohahevitra ity: raha miteny aho fa mankahala vahiny ny rehetra, dia mahaliana ahy kokoa ny mieritreritra ny fototr'izany tsy fitiavana vahiny izany: inona no mahatonga izany, avy amin'ny firenena mankany amin'ny firenena iray hafa ve, avy amin'ny tanàna kely mankany amin'ny tanàna kely iray hafa ve, sa avy amin'ny olom-pirenena mankany amin'ny olom-pirenena iray hafa? Ary ahoana marina no niavian'ny fankahalana vahiny eo amin'ny Trinidadiana, izay miori-paka amin'ny lahateny, ny asan'ny ratran-tsaina amam-panahy taorian'ny fanjanahantany, ary ny paranoia miaraka aminy, ny ahiahy mifandraika ao anatin'izany, ny fahatsapana niasa mafy nanavatsava ny lova navelan'ny razambe, inona *ilay antsika* avy amin'Andriamanitra sy ny *lalànan'ity tany ity*?
Ary ahoana, amin'ny fomba manokana kokoa, ny fandavana ankaterena hatrany ireo taranaka eo am-pelantanan'ny ampira, sy ny fandovantsika ny tsy rariny antsika, tanana mpanao kolikoly nampianarina hamely ny tombontsoantsika manokana — ho fiarovana ny fananana sy ny politika nampianarina am-panajana (sy) henjana — namolavola antsika, isika rehetra, na mpankahala vahiny na mpitsinjo ny mahaolona, misokatra kokoa amin'izany tahotra izany, mipetraka amin'ny lafiny hafa amin'ny fahatezerana? Tahotra mampanantena famaizana mahery vaika kokoa raha toa ka mora sy azo alaina fahatany tahaka izany ny zavatra niasantsika (na tsy niasa manokana tamin'izany aza isika).
Misy ny ahiahy mifandraika amin'ny zavatra mahatonga ahy eto mba handinika lalina momba izany, dia ny fifindrana. Saingy mila lazaina izany, satria mifindra toerana isika, tandindonin-doza hatrany isika hifindra, avy (na hiala) amin'ny tokony na mahavahoaka antsika. Azontsika atao ary ataontsika ny mitoraka vato ho solon'ny mofo, nefa tsy mahatsapa fa voafafa ihany koa isika ao anatin'izany loza nasionaly izany. Fa efa fotoana lavalava izany no nandrava ny fahafenoan'ny fiainantsika izany no tsy midika fa tsy hisy izany anthropocene (fihinanan-tena?) izany.
Rehefa mieritreritra ny fifindrana aho, dia mieritreritra ny olona matory ao anaty korontana baoritra eny amin'ny làlana maloto. Mieritreritra ireo vehivavy tonga fadim-bolana ary mandeha rà tsy misy anavahana ary mampitsahatra ny fijerena ny fahamenan'ny lamba maloto. Mieritreritra ireo ankizy maloto, tsy misasa, mikaotra ny hodiny mora marary kakerin'ny moka. Mamerimberina ny teny fahalotoana aho satria ho ahy satria izany no iray amin'ireo zavatra alain'ny fifindra-monina faobe aminao voalohany: tsara vintana ny ho madio amin'ny fenitrao manokana.
Heveriko ihany koa fa maro amintsika no miandry avy amin'ireo olona nafindra-toerana nampiantsika dokambarotra, na ampahibemaso na lavitry ny fijery Instagram: izay antenaintsika na takiantsika fihetsika mankatoa, karazana fankasitrahana mandrakizay vesarana eo amin'ny sorok'izy ireo efa mangozohozo, ‘gracias, gracias, mil gracias’ (misaotra, misaotra, misaotra be dia be), raha zaraina ny servieta fidiovana, ny kidoro sy ny (vovodronono?) Milo ary angamba hatramin'ny fifanakalozam-bola. Matetika isika, anisan'izany indrindra aho, misaintsaina bebe kokoa ny toetry ny fiantrana ataontsika rehefa afaka manolotra fanomezana isika, ary matetika mitaky karazana fanindrahindrana amin'ny fiderana malefaka sy mampihetsi-po. Ary fanindrahindrana noho ny inona? Ny fahamendrehana iombonana? Kintana isika eo imason'ireo mpifindramonina, noho ny mofo sy ny fromazy ary ny kaonfitiora? Fandohalehana noho ny nanomezana tampon sy harona dite amin'ny siny polystyrène?
Mazava ho azy fa mankasitraka ny asa atao am-pitiavana ny olona. Manontany tena aho hoe inona ireo karazana fitiavana tanterahantsika, anisan'izany aho, ary manantena handray inona avy amin'ireo izay tsy manana na inona na inona afa-tsy fahantrana. Ary raha sarotra zakaina, ny tiako lazaina dia sarotra zakaina. Hitako ny fomba fijerin'ny lehilahy sasany ny ankizivavy sasany. Hitako ny fomba fiheveran'ny lehilahy sasany ny ankizilahy sasany. Nandre sy namaky ary nanatri-maso aho ka nahafantatra fa rehefa sendra tafahoana amin'ny vahoaka ny fahatezerana faobe, dia lasa saika antenaina ny tokony ho mahamenatra tany aloha. Nofo maromaro no mizaka.
Tsy mila zom-pirenena manokana ny fifindrana, tsy mitaky visa manokana hidirana. Tonga amin'ny sambo kely miadana izany, na nidina avy any an-danitra hihazo ireo nosy kely ravan'ny tafio-drivotra ao Karaiba, ilay ranomasina iraisantsika. Mieritreritra aho, tsy mahita valiny mazava afa-tsy tahotra sy aretim-po, amin'ny zavatra hataontsika, iraisana, rehefa mamindra antsika izany. Na mianjera amin'ny lohako izany, na eo amin'ny loha misy randrana kely sy fatotra nataon'ny zafindohaliko, rehefa milentika ny nosy ary ireo mari-panondrona rehetra na mankaiza na mankaiza kosa milaza hoe tsia.
Angona tononkalo 2017 an'i Shivanee Ramlochan, Everyone Knows I Am a Haunting, voafantina tamin'ny Loka Felix Dennis 2018 ho an'ny angona voalohany tsara indrindra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/13/140612/